China 6㎡ Ucingo kwaholela trailer ifektri abakhiqizi | I-JCT
I-JCT 6m2 mobile trailer trailer mobile Model: E-F6） ingumkhiqizo omusha wochungechunge lwama-trailer olwethulwe yinkampani yeJingChuan ngonyaka ka-2018. Ngokususelwa kumahamba-nendlwana oholayo oholelwa phambili u-E-F4, i-E-F6 ingeza indawo yesikrini se-LED futhi yenze usayizi wesibuko 3200 mm x 1920 mm. Kepha uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo ochungechungeni lwe-trailer, inosayizi wesikrini omncane.
JCT 6m2umakhalekhukhwini we-trailer ye-LED （Imodeli: I-E-F6 a ingumkhiqizo omusha wochungechunge lwe-trailer olwethulwe yinkampani yeJingChuan ngo-2018. Ngokususelwa kumahamba-nendlwana oholayo ohamba phambili weselula u-E-F4, i-E-F6 ingeza indawo yesikrini se-LED futhi yenze usayizi wesikrini 3200 mm x 1920 mm. Kepha uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo ochungechungeni lwama-trailer, inosayizi wesikrini omncane. Ngakho-ke i-6m2 I-trailer ye-mobile yakwa-LED inokushaqeka okunamandla kwezithombe ezibukwayo futhi kulula ukupaka nokushintsha izindawo zokupaka ezimweni eziminyene ngasikhathi sinye.
I-6m2umahamba nendlwana we-LED trailer Imodeli: E-F6） iguqule ukwakheka kwendabuko kwemikhiqizo yangaphambilini kwaba yidizayini engenazintambo enemigqa ehlanzekile necocekile nemiphetho ebukhali, ekhombisa ngokuphelele umqondo wesayensi, ubuchwepheshe nokwenziwa kwesimanje. Ilungele ikakhulukazi ukulawulwa kwethrafikhi, ukusebenza, imibukiso yemfashini, ukwethulwa kwezimoto neminye imisebenzi yezitayela zemfashini noma ubuchwepheshe obunqenqemeni noma imikhiqizo.
6m2I-trailer yeselula ehamba phambili yelanga isebenzisa uhlelo lokuphakamisa umfutholuketshezi olungenisiwe olunobude bokuhamba obungu-1.3m futhi luphephile futhi luzinzile. Ukuphakama kwesikrini se-LED kungashintshwa ngokuya ngezidingo zemvelo ukuqinisekisa ukuthi izethameli zingathola i-angle yokubuka engcono kakhulu.
6m2 I-trailer ehamba phambili yeselula ifakwe amadivayisi angangeni ngaphakathi kanye nokubopha ngesandla, futhi ingadonswa ukuze ihanjiswe yimoto ukwenza ukusakaza nokwazisa. Ukwakhiwa kwemishini yemilenze esekelayo kulula futhi kuyashesha ukusebenza.
1.Usayizi esewonke: 4965 * 1800 * 2680mm, okuyi-traction rod: 1263mm;
2.Usayizi wombala ogcwele wangaphandle we-LED (P6) usayizi: 3200 * 1920mm;
3. Uhlelo lokuphakamisa: isilinda se-hydraulic esithunyelwe sisuka e-Italy ngesifo sohlangothi esingu-1300mm;
E-F6（6m2 I-trailer ehamba phambili yeselula）
Umkhiqizo I-JCT Usayizi wangaphandle 4965mm (L) * 1800mm (W) * 2680mm (H)
Imilenze yokusekela 4pcs ITire Amasondo enjoloba aqinile
I-Gross Trailer Mass (GTM) 1228KG Ibhuleki Isandla / umfutholuketshezi
Usayizi Wesikrini 3200mm × 1920mm Dot Pitch P3 / P4 / P5 / P6
Umfutholuketshezi Lifting System Ukuphakamisa Ibanga 1300mm
Iphiko eliphikisana neleveli Ngokumelene neleveli 8wind ngemuva kokuphakanyiswa kwesikrini i-1300mm
I-Voltage yokufaka Isigaba esisodwa 220V Lokukhipha Voltage 220V
Umdlali Nova Ukuthola ikhadi Nova
Isikhulisi samandla 250W * 1pc Somlomo 100W * 2pcs
Langaphambilini 4㎡ EPHATHEKAYO LED Trailer
Olandelayo: I-6M MOBILE LED TRUCK-IVECO
Led Ucingo Truck, Ucingo Led Screen Truck, Ucingo Led Billboard Truck, Led Ucingo Truck Ukudayiswa, Ucingo Led Advertising Truck, Led Ucingo Trailer,